"Vanhu-vanotungamira" ndiyo hwaro hwehukama tsika. "Kubatsirana, kugona kwakanaka, kuremekedza vanhu uye nekuenderera mberi kushanda" ndiyo tsika yedu yebhizinesi. Isu tichasimudzira hutsva nemweya chaiwo, tichigadzira zvigadzirwa zvakanakisa nemidziyo yekutanga-kirasi.
Plate Inotakudza Hip Kuburitswa BS-D48
0 Degree Triceps Dzvinyira Machine
Indoor Kutenderera BS-6521
XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD iyo yakanyanya kutsvakurudza nekugadzira michina yekurovedza muviri. BS SPORTS ine huwandu hwekudyara USD 3 Miriyoni, inofukidza nzvimbo yenzvimbo inodarika 10000 metres.
BS SPORTS bhizinesi chiyero chinovhara iyo R&D, Kugadzira, Kutengesa uye Mushure-pekutengesa sevhisi yekutengesa yezvigadzirwa zvemitambo, imba yekumhanyisa uye zvigadzirwa zvine hukama.Zvimwe 70% zvigadzirwa zvinotengeswa kuNorth America, Eastern Europe, Middle East, Taiwan, ongKong nezvimwe.
Zvokushandisa zvekurovedza muviri zvaunogona kutenga zvekunoshanda kumba sezvo coronavirus quarantine ichiramba ichienderera
Iyo yakakwana yekudzidzira imba yekuseta zvinoreva kuti hauchazofanirwa kubhadhara kune nhengo yekurovedza muviri kana yekurovedza wega. Zvese zvaunoda ndizvo zvekushandisa zvekushandisa. Uye zvishandiso zvako zvekusarudzo zvinosiyana zvichienderana nehuremu hwako hwehutano uye zvibodzwa zvekusimba. Kuedza kuderedza uremu? Unogona kuda kupisa macalorie ne c ...
XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD ichaenda kuChina Sport Show muShanghai muna Chivabvu, 2020 uye ichaendawo kumisangano yekune dzimwe nyika seVietnam, India etc. Tarisira kuzosangana newe ikoko!
Kero: No.2 Zhengxian Road, Paoche Town, Pizhou Guta, Jiangsu Province, China
Nharembozha: 86- (0) 516-66220516